बलात्कारको अभियोगमा साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार विजेतालाई जेल सजाय ! – Everest Dainik – News from Nepal
बलात्कारको अभियोगमा साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार विजेतालाई जेल सजाय !
स्टकहोम । स्वीडेनको अदालतले साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कारका लागि मनोनयन गरिएका ७२ वर्षीय फ्रान्सेली साहित्यकार जाँ–क्लाउड आर्नोल्टलाई बलात्कारको आरोपमा दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।
स्टकहोम जिल्ला अदालतले साहित्यकार आर्नोल्ट दोषी रहेको पुष्टि भएको बताएको छ । आर्नोल्टकी पत्नी स्वेडिस एकेडेमीको सदस्य रहेकी छिन् । यही एकेडेमीले साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कारका विजयी घोषणा गर्दछ । यिनै दुइवटा विवादका कारण यसवर्ष साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार नदिइने भएको छ ।
यस्तै, सन् २०१८ को चिकित्साशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार भने अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स पी. एलिसन र जापानी वैज्ञानिक तासुकु होन्जुलाई संयुक्त रुपमा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । दुवै वैज्ञानिकले क्यान्सर रोगको उपचारका क्षेत्रमा नवीन खोजका लागि उक्त पुरस्कार दिइएको नोबेल समितिले जनाएको छ । -रासस
ट्याग्स: Novel prize, जाँ–क्लाउड आर्नोल्ट, स्वीडेन